इन्टरनेट स्लो भयो ? घरमै बसेर यसरी गर्नुहोस् समाधान - Synergyfm
१७ फाल्गुण २०७७, सोमवार | Mar 01, 2021 | 16:36:44
By synergyfm on	 February 17, 2021 प्रविधि, समाज
चितवन , फागुन ०५ । स्लो इन्टरनेट, आम इन्टरनेट सेवाग्राहीले भोगिरहेको एउटा समस्या हो । तर हामी धेरैजसोले सेवा प्रदायकलाई नै गाली गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय अवस्थामा स्लो इन्टरनेट हुनुका पछाडि हाम्रै हात हुन सक्छ । आज हामी घरमै बसेर तपाईंले इन्टरनेटको स्पिडमा समस्यालाई हल गर्न सक्ने टिप्स सिकाउँदै छौं ।
के तपाईंका डिभाइसहरु पाँच वर्षभन्दा पुराना छन् ? तपाईंको डिभाइसमा एकैपटक धेरै एप वा ट्याबहरु खुलेका छन् कि ? घरका अन्य डिभाइसमा राम्रै इन्टरनेट चलेको छ, तर निश्चित फोनरपीसीमा मात्र इन्टरनेट स्लो भएको हो कि ?
जसमा नेट स्लो हुनुका पछाडिको कारण तपाईंको इन्टरनेट सर्भिस नभएर ती एपहरु हुन् । पुराना ग्याजेटहरुमा पर्याप्त पावर र मेमोरी हुँदैन । त्यसैले यसले स्ट्रिमिङ भिडियो, भिडियो गेमको ग्राफिक्स लगायतका माग पुरा गर्न सक्दैन ।
वाईफाई इन्टरनेटलाई राउटर प्रयोग गरेर घरभित्रका विभिन्न भागमा राखिएका ग्याजेट, डुअरबेल रिङ, गुगल होम डिभाइस, ल्यापटप र स्मार्ट टिभी सबैमा पु¥याइरहनु भएको हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले मोडेमलाई रिबुट गर्नुहोस् र राउटरलाई कम्तिमा एक मिनेटका लागि टर्नअफ गर्नुहोस् । त्यसपछि पुनः अन गर्नुहोस् । ओक्ला जस्ता निःशुल्क स्पिड टेस्टिङ एपको प्रयोग गर्नुहोस् ।
१. पिङ (ल्याटेन्सी) ले तपाईंको कनेक्सनको रियाक्सन टाइमलाई परीक्षण गर्दछ । वा तपाईंले कतिको चाँडो रेस्पोन्स पाउनुभयो भन्ने कुरा चेक गर्दछ । न्यून नम्बर राम्रो हुन्छ । टाइमिङ महत्वपूर्ण हुन एप्लिकेसनहरु जस्तै भिडियो गेमहरुमा २० भन्दा मुनी एकदमै राम्रो हुन्छ ।
२. डाउनलोड स्पिडले इमेज, कन्टेन्ट र भिडियो सामग्रीहरु सर्भरबाट कतिको चाँडो तपाईंको स्क्रिनसमक्ष आइपुग्छ भनेर मापन गर्दछ । एफसीसीको अनुसार २५ एमबीपीएसभन्दा माथिको नम्बरलाई राम्रो मानिन्छ ।
३. अपलोड स्पिडले तपाईंले इनपुट दिइरहनु भएको सामग्री तपाईंले एक्सेस गरेको सर्भरमा कतिको चाँडो पुगिरहेको छ भनेर मापन गर्दछ । सामान्यत तीन एमबीपीएसभन्दा माथिलाई फास्ट मान्ने गरिन्छ ।
अर्काेतर्फ राउटर कहाँ राख्नुभएको छ भन्ने कुराले इन्टरनेट स्पिडमा असर पार्छ । तपाईं वाईफाई राउटरलाई आफ्नो आँखाको उचाईं वा त्यसभन्दा माथि राख्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
यदि एउटै इन्टरनेट प्लान प्रयोग गरेको ४र५ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ भने आफ्नो आईएसपीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र केही अपग्रेड भएको छ कि हेर्नुहोस् ।